विजया दशमी ( दशैँको) शुभकामना !
देशको नाम पनि फेर्ने कि ?
Admin Privelaged Changed!
अथ: द्रूतरथ ऊर्ध्व उदरासन
हैन हौ, शपथ किन खान पर्छ ?
एकादेशको छाडा देश
दुनियाँ हल्लाउन खोज्दा
मेरो आफ्नै घरमा आज ( २८ सेप्टेम्बर) खिचेको
टीका लगाउनका लागि शुभसाइत:यस वर्ष विजयादशमीको उपलक्ष्यमा टीका लगाउने सबैभन्दा राम्रो साइत असोज १२ गते (सेप्टम्बर २८) विजयादशमीका दिन बिहान ९ : ३५ बजे देवी बिसर्जन र बिहान १० : ५५ बजे टीका लगाउनका लागि शुभसाइत रहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ।
मातृशक्ति दुर्गाभवानीको पूजागरी समस्त आसुरी वा दानवी शक्तिको पराजय र दैवी शक्तिको अविर्भाव चाहने हामी नेपाली संस्कृतिका अनुरागीहरूका लागि विजया दशमी वा दशैँले अति ठूलो महत्व राख्छ । समस्त नेपाल , दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, देहरादून, वर्मा र संसारभर छरिएर रहेका आप्रवासी नेपालीहरूको सांस्कृतिक एवं धार्मिक ऐक्यवद्दताको पर्व दशैँले हामीलाई एउटा मालामा उनेको छ । संसारभर छरिएर पनि आफ्नै मातृभूमि र पैतृक थलोको सदैव उन्नति र प्रगति चाहने मनहरूको पवित्र कामनाले नेपालभूमिको अस्मिता इतिहासको सूवर्ण पानाहरूमा सुरक्षित हुनसकेको हो । जुनसुकै धर्म, संस्कृति र परिचय अवलम्बन गरेर स्थानियतामा समाहित भएपनि 'यो मन त नेपाली हो' भन्ने सन्धानले बाँधिएका हामीहरू नेपाली मात्रको महान चाड विजया दशमी वा दशैँको शुभकामना मार्फत एकाकार होऔँ । शुभ दशैँ !
शुभ विजया दशमी २०६६ विक्रम सम्वत् !
झुल्कियोस दैलो दैलोमा अध्यारो चिरी ज्योति
धेरै भो खुशी निभेको आउ उषा लाली पोती
पसिना माग्ने माटो रगतको छिटामा रम्दैन
श्रम र शिप कदर भए फल्छ यही मोती
सदभाबको बाताले आस्थाको छानो कसम
झरी छेकिन्छ कहाँ आर्काको छातामा ओती
भोक किन्न सकिन्न चौरासी बेन्जन भए नी
अंऋत हुन्छ बरु पसिनाले कमाको रोटी
खुशीको जमरा पलाओस हर नेपाली मनमा
अटल होस शान्ति बिबेक देउ सरस्वोती
सारमा कुनै कुरामा सकारात्मक परिवर्तन आउन नसके पनि नया नेपालमा नारा, कुरा र तमाशा खेती मौलाएको छ । धेरै पात्र , वस्तु ,घटना र घटकका परिचयहरूले धमाधम परिचयको काँचुली छाडेर नयामा रूपान्तरण हुन तँछाड मछाड गरिरहेका छन् भलै यो परिवर्तनको उद्देश्य हात लाग्यो शून्य नै किन नहोस् । अहिले सम्म नेपाल नामबाट चिनिने हाम्रो मुलुकलाई अब जात जातका गरा र चिरामा भाग लगाउने अनि जातीय नामको न्वारान पहिराउने अभ्यासका क्रममा , आँफूलाई आमूल परिवर्तनको एकल प्राधिकार प्राप्त अभिकर्ता ठान्ने एउटा मुख्य राजनैतिक पार्टीले अद्यावधि कायम रहेको नेपालको राष्ट्रीय झण्डा परिवर्तन गर्नु पर्ने प्रस्ताव जारी गरेको रहेछ । यसका पक्ष विपक्षमा सर्वसाधारणदेखि विज्ञहरू सम्मका रायहरू अब आउने नै छन् आफ्ना आफ्ना पार्टी वफादारिताका पेटाराहरू बोकेर , तर मेरो विचारमा राष्ट्रिय झण्डा मात्र किन मुलुकको नाम , राष्ट्र भाषा र अन्य कुरा पनि फेर्नु पर्ने जिरिह र जिकिरहरू लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने उचित मौका यही हो । कसैलाई मन भए ढिलो नगरी अगाडि निस्कँदा मुराद पूरा हुने मौका आएकाले , मौकामा चौका हानी नौका तर्न नचुक्नू होला !
झण्डा परिवर्तनका सुझावकर्ताहरू को आरोप छ हाल विद्यमान नेपालको झण्डा हिन्दू राजतन्त्रको हिमायती छ र परिवर्तित नेपालको जातीय संघीयतालाई प्रतिनिधित्व गर्न जति पनि जातहरू छन् तिनका नामका एकएकवटा तारा राखेर नया झण्डा बनाउनुपर्छ । हुनसक्छ , यो पार्टीले प्रस्ताव गरेको झण्डा झण्डै चीनिया मोडेलको तारावाला हुनेछ, रातो पृष्ठभूमिमा । यो कुराको लख काट्न सकिन्छ किनभने यो राजनैतिक दलले राखेका अधीकांश परिवर्तित नेपालका लागि लागू हुने शब्दावलीहरू उतैबाट सापटी लिएका देखिन्छन् जस्तो कि माओवाद, पिएलए, जनप्रतिनिधिसभा , अध्यक्षमण्डलीय प्रणाली, व्यवस्थापिका नियन्त्रित न्यायलय आदि । हरेक कुराको अनुकरण उतैको हुने भएपछि , झण्डामा तारा हुनुपर्ने यो लगावलाई बुझ्दा केही ताराहरूको संख्या थपेर चीनिया झण्डालाई नै आत्मसात गर्ने सुझाव पो हो कि जस्तो देखिन्छ ।
झण्डाले हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको गन्ध बोकेको हो र फेर्न पर्ने हो भने नेपाली भाषाको बचाउ गर्न सकिने कुरा पनि भएन । नेपाली भाषा यसै पनि खस र बाहुनहरूको मातृभाषा भनिने गरेको छ र यसको माऊ भाषा हिन्दूहरूले देवभाषा भन्ने संस्कृत भएको हुनाले नेपालीमा ८०% शव्दहरू संस्कृतबाट नै छन् भन्ने मानिएको छ । यसैपनि जनजाती र तराईयाहरूको नेपाली भाषालाई नेपाल नामको मुलुकले दिएको विशेष स्थान र राष्ट्रभाषाको स्थानप्रति पर्याप्त गुनासो छ ।नया नेपालले सबैलाई न्याय गर्नु पर्ने भएकाले , नेपाली भाषालाई पनि राष्ट्रभाषाको ठाउँबाट हटाएर ' हिन्दी' वा अंग्रेजीलाई 'न्यूट्रल अम्पायर'को दर्जामा स्थापित गराउन पनि धेरैलाई म लागेको हुन सक्छ । नेपाली राष्ट्रभाषा नमानेर हिन्दीलाई च्याप्ने र उपराषट्रपतिले नेपालीमा शपथ खानै हुन्न भन्ने जनजाती महासंघको अडानले यो कुरा देखाएको पनि हो । अत: ओरालो लागेको मृगलाई लखेट्नुपर्छ वा फलाम तातेका बेलामा यसलाई पिट्नु पर्छ भने झैँ , कमजोड नेपाललाई निचोरेर बढि फाइदा लिन यस्तो मौका इतिहासमा दोहोरिने पनि छैन । तसर्थ नया नेपालका ठेकेदारहरूले नेपाली झण्डा फेर्ने प्रस्ताव गरेझैँ केही समयपछि नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषाबाट हटाउन आन्दोलन छेड्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ रहाक हुनाले राष्ट्रभाषा पनि फेर्ने प्रस्ताव ल्याउन ढिलो नगर्दा हुन्छ । यसको बीऊ परमानन्द प्रकरणमा रोपिइसकिएको छ, यसलाई मलजल गरौँ !
झण्डा र भाषा फेरेपछि 'ने' नामका हिन्दू ऋषीले 'पालन' गरेर नेपाल भएको किंवदन्ती पढेकाहरूलाई यो आसयको नाममा आपत्ति लाग्नु पनि अनौठो हुने कुरा भएन । त्यसैले यो पुरानो नाम 'नेपाल' मा किन रोकिने भनेर क्रान्तिकारी पेटमा आगो दन्किन पनि सक्छ । त्यसैले प्याकेजमा नै सबै कुरा फेरे हुन्छ । राष्ट्रभाषा , राष्ट्रिय झण्डा र मुलुकको नाम नै फेरे पछि त हामी पुराना कुराबाट मुक्त भैहाल्यौँ नि ! आमूल परिवर्तनको यस्तो विधि हुँदा हुँदै किन अरू प्रयत्नमा रुमल्लिइरहने ? देशको नाम पनि 'माओस्तान' वा 'जनताको जनजातीय जनसंघ' वा यस्तै केही राखेर चमत्कार गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न !
दोष तिमी मेरो नजरप्यालालाई
सम्हाल त्यो झर्झर यौवनज्वालालाई
रोक्न सक्दैन फूलले आफ्नै वासना -
कसरी छल्छौ तिमी हजार आँखालाई ।
फेरी माया फाटेपछि सिउन गाह्रो हुन्छ ।
फूटेको प्यालामा मधुरस पनि पिउन गाह्रो हुन्छ
साँचेर फाटेको माया, बाँचेको छु पिएर -
नपाए'नि माया, पिउन नपाए जिउन गाह्रो हुन्छ ।
Update: Admin Privileges have been restored. But still for extra security I still encourage to change password. Thanks for the cooperation during this time.
We are suspecting our administrator's password has been reached to second person. Admin privileges have been on hold forashort time. Dautari Admins I would request to change your passwords!
(पहिले नै लेखेको र अरु ठाउँहरुमा पोस्ट गरेको थिएँ, यहाँ पनि गर्न मन लाग्यो)
उसले चुरोटको अर्को लामो सर्को तान्यो।
बस, टेम्पो, मोटरसाइकल, साइकल र मान्छेहरु सबै अधैर्य देखिन्थे ऊ जस्तै। धुलो त मानौँ भुईँबाट बसाइँ सरेर हावामै कतै आफ्नो साम्राज्य फैलाऊन खोज्दैथियो। चुरोटको धुवाँ उडाउने बित्तिकै उसले एकपटक नराम्रो संग खोक्यो र फेरि उतै हेर्न थाल्यो।
३ जना एक अर्काको अनुहार ठोक्काऊलान जसरि नजिकै उभिएर बोल्दै थिए।
“पैँतिस हजार…दुबई पठाइदिउँ?”
“कति लाग्छ नि लाग्न चाहिँ?”
“एक लाखमा भिसा आइपुग्छ!”
“मेरो आफ्नै भान्दाईको म्यानपावर हो, दुबई गएर आउँछन् बर्षमा ३-४ पटक, चिनेको कम्पनिमा हो जानासाथ काम सुरु हुन्छ, सोच् राम्ररि!”
उ सडकतिर हेर्न थाल्यो।
“साला म्यानपावरहरु! ठगेर धनि हुन्छन र अझै अरुलाई कमाउने सपना देखाउँछन्!”
“के गालि गर्नु, एक लाख त हैन २०-३० हजारमा जान पाइने भए भोलि नै उड्न हुन्थ्यो यो नरकमा आधीपेट खाएर बस्नु भन्दा त!”
उसले थुक्यो र फेरि चुरोटको सर्को तान्यो।
“अझै आइन त?”
उसले आफैँलाई प्रश्न गर्यो र उता हेर्न थाल्यो।
उसलाई यसरि घाम र धुलोमा कुर्न साह्रै बोर लाग्छ।
“बालाजु हो? ल ल आउनुस छिटो!”
बस नजिकै रोकिएको थियो र फुच्चे खलाँसिले उसलाई सोधिहाल्यो।
ऊ केहि नबोलि मुख बिगारेर अलि पर सरेर बस भन्दा पर हेर्न थाल्यो।
“ओ दाई नचढ्ने भए किन बस रोक्ने ठाउँमा उभिन पर्यो?”
बस गुड्दै थियो र खलाँसि ऊ तिर हेरेर बोल्दै थियो। उसलाई हेपिएको आभाष भयो।
उसलाई खलाँसिको टाउको बसको टायरमुनि हुलिदिन मन लाग्यो। बस गुड्दै पर पुग्यो,खलाँसिले उसलाई गिज्याउने भावले हेरिरहेको जस्तो लाग्यो।
उसले चुरोट मुखसम्म ल्यायो र मुख बिगारेर हुत्याएर फालिदियो। फिल्टर सम्म बलिसकेछ।
ऊ फेरि उतै हेर्न थाल्यो।
“ के मर्थि र मुखले मात्र ठिक्क पार्छे सधैँ!”
उसले मुख बिगार्यो।
“दाई एक रुप्पे दिनोस न?”
गाला र निधारमा कट्कटिएको मयल लिएर पँहेला दाँत देखाउँदै एउटा खाते ऊ संग पैसा माग्दै रहेछ।
“के पैसा? चुप लाग् साले खाते!”
उसले खातेलाई हप्कायो र खातेसंग छोइएला कि भनेर अलि पर सरेर अर्कै दिशामा हेर्न थाल्यो।
पर ४ जना केटिहरु कुनै स्कुल ड्रेसमा शायद बस कुर्दै रहेछन्।
उसको नजर त्यतै गयो।
“सालीहरु सब घुस्याहाका छोरिहरु होलान्! बाउले ठगेर ल्याउँछ यिनिहरुको मोज!”
केटिहरु एकआपसमा कुरा गर्दै हाँस्दै थिए।
उसका आँखाले केटीहरुले लाएको स्कर्टमुनिको घुँडाहरु तुलना गर्न थाले।
“ यी सबै केटासंग सुत्ने बानि परिसकेका हुन्!”
उसले आफ्नो अनुमान मनमनै आफैँलाई सुनायो।
“साली रश्मी अझै मर्दिन!”
स्कर्टबाट देखिएको घुँडाबाट माथिको अंग कल्पनामा बनाउँदै उसले रश्मीलाई सम्झियो।
कुनै स्कुलबस केटीहरुको नजिक रोकियो।
केटीहरुको हल्ला बढ्यो।
बसको ढोकाबाट कुनै भर्खरको केटाले हात झार्यो र पालैपालो सबै केटिको हात समात्दै बसमा तानेर चढायो।
उसले फेरि मुख बिगार्यो।
“ बिग्रने केटि धेरै हुन्छन बिगार्ने केटा कम हुन्छन!”
उसको अनुमानमा काठमान्डुमा अल्पसंख्यक खेलाडी केटाहरुले बहुसंख्यक केटिहरुलाई बिगारेका हुन्छन्।
ऊ बिगार्नेमा कहिल्यै परेन वा मौका पाएन।
“र.. हरु के हेर्छन कुन्नि?”
उसले फेरि आफैँलाई प्रश्न गर्यो।
“गाँठ भए जे पनि पाइन्छ काठमान्डुमा!”
उत्तर पनि ऊ आफैँले दियो।
केटिहरुलाई तानेर बसभित्र उकाल्ने केटा बसको ढोकामा उभिँदै हाँस्दै थियो र बस गुडेर उसको नजिकबाट गयो।
“साले म भन्दा ५-६ वर्ष कान्छो होला, लाईफको मोज सबै थाहा पाइसक्यो!”
उसको निधारमा ईर्ष्याको लहर जन्मियो।
उसले घडि हेर्यो र फेरि मुख बिगार्यो।
“रश्मी आइपुग्नु पर्ने हो अब त!”
उसले फेरि उता हेर्यो।
“अस्तिको त्यो बाइकमा हालेर लाने रन्जन बोकासंग यसको पक्कै पनि लसपस हुन पर्छ!”
“रन्जनेले दुख दिन्छ भएको नभएको गफ लाउँछ भन्छे अनि त्यसैसंग बाइकमा टाँसिएर हिन्छे साली!”
उसको बिग्रेको मुख झन बिग्रियो।
“ साला अर्को वर्ष यतिबेला सम्म त कसो एउटा बाइक नकिनौँला!”
उसले खल्ति छाम्यो र फेरि चुरोट सल्काएर तान्न थाल्यो।
“यु आर अ नाइस गाइ नि निरज, तिमी त्यो रन्जने जस्तो बिग्रेको छैनौ नि त्यसैले त तिम्रो माया लाग्छ मलाई!”
रश्मीले उसलाई भनेको सम्झियो।
“बिग्रेकोसंग किन जोल्ठेर हिन्न पर्या नि तेल्लाई चाहिँ?”
उसले रिसमा प्रश्न गर्यो, शायद आफैँलाई।
“ह्या बाइकमा घरसम्म पुर्याइदिन लगाकि होलि नि कम्ता बाठि छे त्यो!”
उसकै मनले उत्तर दियो।
उसलाई थाहा छैन किन हो, एकैछिनमा उसलाई रश्मीको माया लाग्छ र रश्मी प्यारी, पवीत्र, सोझि लाग्छ र एकैछिनमा उसलाई रिस उठ्छ र रश्मी चालु, चरित्रहीन र धुर्त लाग्छ।
उसले फेरि घडि हेर्यो।
“उसकै काम गरिदिन भेटौँ भन्छे उहि आउँदिन आधा घन्टा भन्दा बढि भैसक्यो!”
उसको रिस फेरि बढ्न थाल्यो।
एक पटक हैन दुई पटक हैन धेरै पटक उसले रश्मीलाई यसैगरि कुरेको छ र रश्मी यसैगरि आइदिएकि छैन। उसको रिस यसैगरि आकाशमा पुगेको छ र रश्मीको सामु परेपछि रश्मीको मिठो बोलीमा नआउनुको कारण सुनेपछि ऊ सधैँ पत्याउन बाध्य भएको छ।
उसलाई थाहा छैन ऊ किन मनमा उब्जेको रिस र प्रश्न रश्मीको अगाडि देखाउन सक्दैन।
ऊ अलिकता बेचैन देखियो।
“यस्ता संग लभ गरेर के बस्नु?!”
उसले फेरि घडि हेर्यो र केहि सोचेर चुरोट फाल्दै बाटो काट्यो।
एउटा कम्यूनिकेशनको बुथ भित्र छिर्यो।
“दाई एउटा लोकल कल!”
पसलेले केहि नबोलि फोन देखाइदियो।
उसले कतैको नम्बर घुमायो।
“हेलो! रश्मी छ?”
“हजूर म निरज!”
“हो निरज नै हो हजुर!”
“ए! त्यहि त अहिले सम्म आइन भनेर यसो फोन गर्या! हस् त म कुर्छु अझै!”
ऊ पैसा तिरेर बाहिरियो, र फेरि सडकवारी पहिलेकै ठाउँमा आयो।
“ अलि ढिलो हिँडिछे जस्तो छ, मैकहाँ जाने भनेर हिँडेकि रे!”
ऊ अलि सन्तुष्ट देखिन्थ्यो।
“बिचरी टेम्पोमा कोच्चिएर हिँडिरहेकि होलि!”
उसको मनमा माया र सहानुभूती पलायो।
“खान कता लैजाने होला?”
उसले मनमनै भन्यो र खल्ति छाम्यो।
“छ्या त्यो समोसापसलमा त नाइँ पाखेहरु मात्रै हुन्छन!”
उसलाई रश्मीले भनेको याद आयो। उसलाई फेरि हल्का रिस उठ्यो।
“खल्तिमा डो नभएसि पाखे न साखे, त्यति नि बुझ्दिन साली!”
“बेकरीको मम क्या दामि हुन्छ नि निरज!”
फेरि उसलाई रश्मीले भनेको याद आयो।
“त्यसको बाउको कमाई त्यहि हो, तेल्लाई कसरि थाहा हुन्छ काठमान्डुको सबै महंगा रेस्टुरेन्टको मेनु??”
रिसले उसको निधार फेरि खुम्चियो।
“खै अझै मरिन? यति दुख दिन हुन्छ तेल्ले मलाई?”
नजिकै एउटा बाइक रोकियो।
उसले दाँत देखायो।
“काँ जान लाग्या? हिन् म छोड्दिन्छु!”
“हैन यार तँ जा, पछि भेटौँला मेरो काम छ!”
उसलाई ध्रुवे गए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो।
“त्यसैलाई कुर्या त होलास नि तैँले। के त्यस्तो केटिको पछि लागिरा तँ? अगि भर्खर रन्जनेले तन्दुरी रेस्टुरेन्ट भित्र लिएर गा’ छ त्यसलाई तँ साले यहाँ कुरिराख्!”
ध्रुवेले हेल्मेटभित्रको आँखा चम्काउँदै भन्यो।
उसको मुटु हल्का उफ्रियो, अनुहार अलि बढि कालो भयो।
“हैन यार तेस्ता केटिलाई म किन कुर्थेँ, अरु नै काम छ क्या पछि भनौँला!”
“ल त, तँ यहिँ घाममा पाकेर बस् म गएँ!”
उसलाई औडाहा भयो।
“साली मलाई यता कुराएर त्यो बोकोसंग रेस्टुरेन्ट जान्छे!”
उसको मुख झनै बिग्रियो।
उसले टेम्पो रोक्यो।
टेम्पोमा दुईजना मोटि आइमाईहरुको बिचमा ऊ लगभग हराएको थियो। टेम्पो घाममा तातेको थियो र ऊ भित्रको औडाहा भन्दा बाहिरको गर्मि कम थिएन।
टेम्पो लैनचौरबाट लाजिम्पाट पुग्यो।
बाटो भरि तन्दुरी रेस्टुरेन्ट हेर्न उसले निकै सकसका साथ टाउको तन्काइरहेको थियो।
उसले टेम्पोको छत एकपटक ठटायो।
ड्राइवरले शायद सुनेन, टेम्पोको स्पिड उस्तै थियो।
रिस, जलन, गर्मि र औडाहामा उसले ४-५ पटक जोडले टेम्पोको छत ठटायो।
टेम्पोले ब्रेक लगायो, सबैले उसलाई वाल्ल परेर हेरे।
ड्राइवर भुन्भुनाउँदै थियो।
“आफ्नो बाउको टेम्पो भन्ठान्छन साले पाखेहरु!”
उसले ड्राइवरले बोलेको सुने पनि सुन्या नसुन्यै गर्यो।
बाहिर ओर्लेर पैसा फुत्त फाल्यो र एकातिर हिँड्यो।
फत्फताउँदै ड्राइवर टेम्पो चलाउन थाल्यो।
उसले रेस्टुरेन्ट देख्यो।
सर्ट प्यान्टबाट लगभग पुरै बाहिर निस्केको थियो। उसले सर्ट प्यान्टभित्र कोच्यो। उसलाई थाहा थियो उसको व्यक्तित्वले रेस्टुरेन्ट छिर्नु भनेको बेराहरुको गहिरो अविश्वासको आँखा आफ्नो टाउको देखि खुट्टासम्म बग्न दिनु हो।
रेस्टुरेन्टको ढोका खुल्यो।
ऊ सकपकायो र ढोकाको छेउमा उभियो।
रश्मि कुर्थाको सल मिलाउँदै फटाफट बाहिर निस्किइन र अलि पर पुगेर भुइँमा हेर्दै उभिइन्।
उसको मुटुको धड्कन बढ्यो।
फेरि ढोका खुल्यो। रन्जन हेल्मेट समातेर फुत्त निस्कियो र रश्मी उभिएको ठाउँमा गयो।
उसलाई दुवैले देखेनन्।
“ स्टुपिड मान्छे के गरेको अगि?”
उसले रश्मीको स्वर सुन्यो र लगत्तै रन्जनको हाँसेको स्वर सुन्यो।
“को थियो र त्यहाँ? बेसि डराउने क्या तिमी?”
रन्जन बाइक स्टार्ट गर्दै थियो। रश्मि पछाडि बसिन्।
बाइक गुडेर टाढा जानु भन्दा अगाडि उसले रश्मीको आवाज सुन्यो-
“ अस्तिकै बाटोबाट लैजाऊ है? धेरै दुख दिने हैन नि भन्द्या छ…….दुई घन्टामा घर पुग्न पर्छ उफ्!”
बाइक टाढा पुग्यो।
ऊसको मुटु उफ्रेको उफ्रेई थियो।
रेस्टुरेन्टको ढोका खोलेर एउटा बेरा उसैलाई हेरिरहेको हरेछ।
“के हेर्या दाई? तपाइँ हामिसित यस्ता केटि हिँड्दैनन्, यो दाई त हरिप छ, फेरि फेरि ल्याउँछ केटिहरु!”
ऊ ऊसले केहिबेर अघि गरेको आफ्नै अनुमान सम्झँदैथियो, बिगार्ने केटा कम हुन्छन्!
क्रान्तिकारी तरिकाले गाडी यसरी चढ्न सकिन्छ ! परम्परामा क्रमभंगताको अनुपम नमूना !
नयाँ नेपालको नारा धेरै सुने पनि यथार्थमा नयाँ नेपालमा के कुरा नयाँ हुनेछ त भन्ने बारेमा यथेष्ट जानकारी प्राप्त नभैरहेको बेला, नयाँ नेपालको एउटा दृश्यकथा देखापरेको छ हिजो बिराटनगरमा । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा मुख्य अतिथि बन्न पाल्नुभएका प्रधानमन्त्री माधव नेपालको विराटनगर आगमनलाई, माओवादी कार्यकर्ताहरूले देशव्यापी रूपमा गर्ने गरेको पाषाणवृष्टिपूर्ण स्वागत गरिसकेपछि, आफ्नो बाहुबली सामर्थ्यको प्रमाण समेत देखाउन यो गाडीहरूको उर्ध्व उदरासनमय अनौठो नजारा देखाएका रहेछन् ।
हिमालमुनि हरिया पहाड फैलेका टाँकुरा
मगमग बास्ना छरेका सधैँ पालुवा आँकुरा ।
आकाशमुनि उडेका चील पखेटा फिजाई
सौन्दर्यशील सुन्दरता औधी प्रकृति रिझाई ।
सुनौला बादल रुपौला खेत धान छ मुलेको
बगेको नदी झरेको झर्ना सौन्दर्य खुलेको ।
दह्रो छैन भन्छन् चिप्लेला पाउ हजुरको
हार्दा'नि जित हुने हुन त दाउ हजुरको ।
वहाबको धार बुझी खियाउनु आफैँ अब
अरुको भर पर्दा डुब्ला नि नाउ हजुरको ।
ऊ नेपालमै थियो। सहरको कुनै साइबर क्याफेबाट दिनको समयमा विदेशिएको साथीसँगै कुरा गर्दै थियो:
ऊ: के छ, मस्ती होला नि तेरो त ?
उताबाट: मस्ती कि सास्ती ?
ऊ: विदेश गएपछि के को सास्ती ?, सास्ती त हामी यहाँ बस्नेलाई पो हुन्छ !
उताबाट: हैन त्यस्तो हैन..., यहाँ पनि समस्या उही हो… ।
ऊ: अनि कमाइ कति हुन्छ त ?
उताबाट: ......., …
ऊ: ...ओहो !..... त्यसो भए त मलाई पनि बोलाऊ न हो !...
उताबाट: ...हैन कुरा त्यस्तो हैन ..., .... ....
नेपालमा अचानक बत्ती निभ्छ र इन्टरनेट डिस्कनेक्ट हुन्छ । उताबाट लेखिएको सबै मेसेज उसले पढ्न सक्दैन ।
खुल्ला आकाश जूनतारा, गीतको लागि भाका होला ।
लाली गुराँस फुलिरहने, नवै रंगका पाखा होला ।
प्रकृतिको सिर्जनामा, सबै दङ्ग मख्ख पर्छन् ,
प्रकृतिकै उपहार हाम्ले साथ पा'का होला ।
कुरा ढिलो बुझ्ने र तीन पल्ट हाँस्ने उपबुज्रुगको कोटीमा मेरो नाम दरे हुन्छ । डेढ दुई महिनादेखि नेपाली समाचार हेरेको छु, जता पनि परमानन्द र हिन्दी शपथको मात्र चर्चा छ । त्यो पनि एक वर्ष अघि खा’को शपथको कुरा अहिले किन गर्दैछन् , मरिजाऊँ बुझ्याभए । अब ऊ बेला शपथ हो कि के जाती हो खाने बेलामा , मन्त्री -उन्त्रीलाई टि भि’आँ देखेकै हो ।
कसैले धोती कुर्ता, कसैले आईमाई भएर नि जिनका पाइण्टाँ , कसैले खरानी रंगका पाइन्ट कमेजमा रातो टाइ र टोपी लगार, कोहीले पाण्डा , डिंगो अनि गोल्डस्टार जुता लाएर शपथ खा’थे । भाषा पनि अनेक थरिका थे , यिनले शपथ खाए कि कुपथ खाए खासै कसैले मतलब राखेको देखिएन । अब मन्त्री बन्ने , फिर्ता हुने र नया आउने कुरा हुन कुनै आइतबार कुर्न नपर्ने मुलुकाँ , के कपडा लाएर के भाषामा के जाति कुरा कतिले खाए भन्ने कुराको हिसाब किताब औँला भाँचेर राख्न पर्ने दरकार पो हाम्लाई किन परेको छ र ? त्यसैले राखिएन ।
पहिला पहिलाको जमानामा मन्त्री, रापंस , सांसद बन्ने हरूले दौरा शुरवाल लाएर अगडि उभिएको एक जनाले पढेको कुरा अरू पनि त्यस्तै पहिरन लगा’काले समूहमै दोहोराउँथे र पढ्थे । किन होला यति ठूला जस्ता देखिने मान्छेलाई पनि केटाकेटीलाई पढाए झैँ , दोहोराउन लगाएको भनेर सोचिन्थ्यो । त्यहाँ कहिले काहीँ राजा पनि हुन्थे । पछि कुरा बुझियो यही कामलाई शपथ खाने बनेर भनिँदो रहेछ । हामी चानचुने मान्छेले ‘विद्यानास, गाईखाने, म मरि जाउँ, जनैको धर्म , म प्वाक्क हुन परोस्, भने जस्तै ठूला मान्छेले राम्रो तरिकाले किरिया खाएको कुरालाई नै राजनीतिमा शपथ खाने भनेर भनिँदो रहेछ । यति त बुझेकै हो अल्लि पछि बुद्दि छिप्पिन थालेसि । चानचुने मान्छेले कसम वा किरिया खा’को छ भने उसले झूटो भनेको, गरेको वा भन्ने गर्ने छैन कि भनेर भरोसा गर्न सकिने अलिकति ठाउँ रहन्छ । तर पनि , पच्पच्ति किरिया खाएर , मान्छेको विश्वासलाई पनि गाजर मूला खाएझैँ कर्‍याम कुरूम पार्ने नभएका पनि हैनन् ।
तर यी पहिला न्यायधीश पनि भएर नेपाली भाषाँ अदालतका निर्णयका ठेलीका ठली लेख्ने तिरहूते बाहुन परमानन्द झालाई देशको उपराष्ट्रपति भएसि के रोग लागेछ बिचरा नेपाली खर्लप्पै भुलेछन् । नेपाली भुलेपछि नेपालीसंग लिपी उपी मिल्ने दाइ भाषा हिन्दीमा शपथ खाएछन् । यो कुरा अदालतले एक वर्ष पुग्दा, नपुग्दा थाहा पाएर भन्दिएछ ‘ हैन, नेपालको उप हुने हो भने , नेपालीमा नै शपथ खान पर्छ ‘ । यही कुरोमा हलो अड्केर मुलुक ठप्पै भैसक्दा पनि मेरो मगजमा कुरा घुसेन । मलाई भने यो शपथ खाने नियम हटाइदिएर टण्टै खलाँस पार्दा हुन्न र भन्ने लागेको छ ।
शपथ जुन भाषाँ खाए नि , शपथले बाँधेर राख्ने कुरो पनि हैन । शपथ खा’काले इमान्दार र नैतिकवान भएर कुरा वा काम गर्छन् भन्ने पनि कहिँ देखिएको वा लेखिएको छैन । गतिला शपथ खाएकाले नै देश लुटेर, ध्वंश पारेर यो हालत बना’र हाम्रो कन्तबिजोग भएकै छ । शपथ खाएर , शपथलाई अगस्ति मुनिले झैँ पचाएर, देश नै खान मिलेकै छ भने शपथ को इज्जत बचाउन पनि अब शपथ खान नपर्ने बनाउने बेला भएन र ?
मलाई शपथ खाँदामा यो राम्रो कुरो हुन्छ है भनेर कसैले बता’को पनि छैन । शपथ काण्डले देशलाई नै कुपथमा पारेको हो कि जस्तो मेरो मोटो बुद्दिले ठानिरा’छ । त्यसैले मेरो कुरो कसैले सुन्छ र मान्छ भने मेरो फिराद यही छ कि ‘ मिल्छ भने यो शपथ कुपथ केही खान नपर्ने बनाऊँ , हुँदैन र खाने नै हो भनेर जिद्दी गर्ने हो भने जसलाई जे मन पर्छ त्यै त्यै तरिकाले, रूचि अनुसार खान मिल्ने पारौँ’ । नया नेपालमा खाने कुरा र पकवानमा पनि कसैलाई ‘यही खान पर्छ र खा’ भन्न पाइन्छ र ? त्यसैले शपथ खान र ख्वाउन कर नलगाऊँ , खानै पर्नेले रूचि अनुसार अझ मिल्छ भने घर घराँ गएर खाऊँ । यसो गर्दा गणतान्त्रिक लोकतन्न्त्रको कायाकल्प हुन्छ ! हैन र ?
ओखलढुङ्गा, हाल : दोहा कतार
तिमीबाहेक यो मन कतै सर्दै सरेन |
यो मुटुमा तिम्रो माया मर्दै मरेन ||
अझै तिमीलाई पर्खिरहेछु भेटिएला भन्दै |
बाँचिरहेछु बिछोडका दिनहरु गन्दै ||
बटुल्छ थोते मुस्कान,
कुनाको बस्तीमा ट्वार्र-ट्वार्र हुक्का तान्ने
मानौँ ऊ त्यो ज्यापूबा हो-
उही मुस्कानको विरही रङमा
चाउरी छल्काउँदै गालाकिनारसम्म
उस्तै उदास होली खेलिरहन्छ
हेर्दाहेर्दै हतार-हतार दुनियाँ
सायद कहीँ-कतै नजिकै
ओत खोज्न दौडिरहेछ ।
छड्के पर्छ त्यो बतासे पानी
सानो छाता, दुई आकृति
तैपनि अट्न खोजिरहेछ।
गडगड गड्कन्छ आकाश
हावाको वेग बढ्दै जान्छ
अझै चुनौती थपिरहेछ ।
छाता उढ़छ बेवास्ताले, सायदै
पानीको थोपै छिर्न सक्दैन
दुई बीचको दूरी खुम्चिसकेछ ।
बुझेन चुनौती मैले, दुनियाँले
तर चुनौती बुझ्ने त्यो छाता
महत्वहीन भई उत्तानो लडिरहेछ ।
Posted by: quest4destination Labels: गीत/ गजल/ कविता
अन्जान बिबश एक्लो
जीवनको खुसी चहार्दै हिडेँ
भीडभाडको माहौलमा झपार्दै हिडेँ
जीन्दगी के हो परिभाषित नहुँदा
धर्तिमा आफैलाई लतार्दै हिडेँ
कर्मको बोझ थुप्रियो काँधमा
अशक्त पाउहरु बटार्दै हिडेँ
जीउनलाई साँच्चिकै नमज्जा लाग्यो
गलहत्याई पचक्क मार्दै हिडेँ
भूमिमा निष्फिक्री ढलेको ज्यान
यमराजको समिपमा टकार्दै हिडेँ ।
भारतद्दिपको छेउछाउमा पाखा पखेराको खोचिलो क्षेत्रमा एउटा अचम्मको देश छ। मानचित्रमा देखिने त्यो देशका रेखा छुट्टाउनै मुश्किल पर्छ,हरेक लेखौटमा सिमाना फरक फरक छन,सिमाना यसै हो भनेर भन्न सक्ने स्थिती छैन। रात रहंदा अग्राख पलाउंछ, अग्राख पलाउंदा सिमाना हराउंछ। बिचित्रको छ सिमारेखा। त्यो भन्दा बिचित्र सिमारेखा भित्र छ। त्यो बिचित्रतामा के गजबता हुन्छ कसैलाइ पत्तो हुदैन। एउटाले हुन्छ भनेर सक्न नपाउंदै अर्को हुन्न भनेर सकिसकेको हुन्छ। यस्मा आश्चर्य मान्नै पर्दैन किनकी देशै नै बोलीमा चलेको हुन्छ,हरेक ब्यक्ती आदेश दिन पोख्त छन। तर सबै आदेश कामलाग्दैनन,जस्ले सक्छ उसकै आदेश शिरोपर हुन्छ। कानुनको नाममा एक दुई खोस्टा छन। न त्यो कसैलाइ पत्तो छ न कसैलाइ पालना गर्ने स्वभाव छ। ठ्याक्कै भन्दा कानुनको अनुशरण गराउने कस्ले, पालन गर्ने कस्ले एक्दमै अनयौल छ। कुनै कुनै देशमा कुकुर बिराला पनि अनुशासनमा बस्छन तर त्यो देशका जनताको त्यती पनि अनुशासन छैन भन्नै हुदैन। कागले कान नलगे पनि कागकै पछि दगुर्ने हुलहरु त्यो देशलाइ छेडछाड गरे त आफ्नै घर जलाउन किन नपरोस बिरोधमा उत्रिहाल्छन। राजनितीक चेतना निकै उच्च छ। दश दश बर्षमा जनआन्दोलन भइरहन्छ। जनसंख्या भन्दा शहिदको संख्या बढी छ। आन्दोलन र शहिदको परिभाषा बुझ्न जरुरी छैन, उनीहरु त्यसको उच्च सम्मान गर्छन। अनी जनआन्दोलन गरिरहन्छन,शहिद बनिरहन्छन।
सर सम्मान निकै हुनेगर्छ त्यो देशमा। आफ्ना पूर्खाहरुको सालीक नै तोडे पनि बिदेशी नेताहरु फोटोहरु निकै जतनका साथ भित्तामा झुन्डाइन्छ। अझ संयोगबस कुनै देशको पाइखाना मन्त्री सवारी भए त सबैजना धनुष्टंकार भइबक्सिन्छ। नेताहरुमा हांहाकार चल्छ, राष्ट्रिय छापाहरुमाहरुमा अड्कल काटिन्छ अब सरकारको बयल गाडा बायां मोडिन्छ,फलानो ठाउंमा गएर रोकिन्छ। जब पाइखाना मन्त्रीको फिर्ती सबारी हुन्छ एक झुन्ड उफ्रिन्छ अर्को झुन्ड ओल्सिन्छ तर दुबै झुन्डको लोलीमा बोली मिल्छ अनि देशमा एउटा ऐतिहासीक निर्णय हुन्छ अब हरेक घरमा चर्पी निर्माण गर्ने। न योजना छ न बजेट। केही घरहरुमा चर्पी भइसकेका हुन्छन, केही घरहरुमा चर्पी निर्माण गरिन्छ, कतै त्यसै छाडिन्छ। तर अन्तत सबैले बाटैमा आची गर्छन। चर्पीको उपयोगिता कागतमै सिमित रहन्छ,इतिहांस बनेर दश बर्ष बित्न नपाउंदै फेरी त्यही चर्पीको लागी आन्दोलन हुन्छ,दुइ चार जना मर्छन,शहिदमा समेटिन्छन अनि देशमा पून चमत्कार हुन्छ। चम्तकारसंगै बिभिन्न अबतारको जन्महुन्छ। बिभिन्न बाबाहरु छ्याप छ्याप्ती शहरमा भेटिन्छन, कोही कात्रो बनाउन लाग्छन, कोही पात्रो बनाउन लाग्छन अनि कोही कानुन बनाउन लाग्छन। उनिहरुको कागजी कानुन उनीहरलाइ मात्र बुझ्ने अधिकार छ,अदालतले बुझेर ब्याख्या गर्ने खोजे कसैलाइ मान्ने हुनेछैन। कुरो सहि नै हो आफुले मान्ने कानुनको ब्याख्या आफैले गर्ने हो कहीं अदालतले गरेर पनि हुन्छ? कानुन पालन मनखूशी ले गरिन्छ। तर चाल चलन गज्जब छ त्यो छाडा देशको। नक्कली जोगीले खरानी धेरै धसेजस्तो जांहा कुनै नियम कानुनको वास्ता गरिंदैन त्याहां संबिधान सिजन सिजनमा बनिरहन्छ।
केहि दिन अघि पढेको ठरकिजीको दुई लाइनले गजबसंग मनमा प्रभाव पारेको थियो । अनि एकलव्यजीले टांसेको स्कोलार ट्याक्सी ड्राइभर डा. काइको ब्लगले (http://www.dautari.org/2009/08/blog-post_29.html) पनि मथिंगल खल्बल्याइरहेको थियो । यसै मेसोमा आज आफ्नो काम गर्ने अड्डामा पनि सानो तिनो बोतल सकाउने कार्यक्रम थियो र बोतलसंगै ठरकिजीको दुइ लाइन सम्झे :
बोतलहरु सकिए तर मेरो दुनिया हल्लाउने र हल्लिएको हेर्ने प्रयास यसरी सकियो :
न त दुनियाँ हल्लाउन सके,
न त दुनियाँ हल्लिएको नै देखें,
दुई तीन बोतल सिध्याएपछि अरुलाई हल्लाउने त कुरै छाडौं,
फगत आंफै हल्लिन थालें ।
संभवत नेपाली या भारतियहरुले जस्तै चाइनिजहरुले कम्पलेन (वा शिकायत) गर्ने गर्दैनन र पृष्ठभुमीका धेरै कुराहरु बाहिर आउने गर्दैनन । त्यसैले किन र कसरी डा. काइ मिङले आफ्नो कामबाट हात धुनु पर्यो भन्ने कुराहरु धेरैलाई थाहा हुन सक्दैन ।
संगै काम गर्ने २-३ जना चिनिया मित्रहरुसंग बोतल शुरु भए पछि यस विषयमा कुरा भयो । उनिहरुलाई यसबारेमा धेरै थाहा रहेछ , किनकि उनको विषयमा चिनिया ब्लग र समाचारहरुमा समेत प्रशस्त चर्चा रहेछ ।
सिंगापुरको मोलेकुलर बायोलोजी सम्वन्धी संस्थाहरुमा केहि वर्षदेखि पश्चिमा (अंग्रेजी मातृभाषा भएकाहरु) लाई धमाधम जागिर दिइएको रहेछ । अंग्रेजी मातृभाषा भएकाहरुको लेख र प्रकाशनको रेकर्ड अरुको भन्दा कैयौं गुणा बढि छ यो धेरैले मानि आएको र जग जाहेर कुरो हो । किनकि तपाईको लेखन शैली भड्काउ अर्थात “ग्ल्यामरस” छैन भने अचेल साइन्टिफिक जर्नलहरुले समेत तपाइका लेखहरु पहिलो पटकमै रिजेक्ट गरिदिन्छन । मेरो आफ्नै फिल्डमा पनि देखेको कुरा हो नेचर र साइन्सहरु समेत “इम्प्याक्ट राख्ने लेखको” बहानामा भारतीय न्युज च्यानल "आजतक" र "एनडिटीभी"को स्तरमा ओर्लन्छन भने “अनुसन्धान” भन्ने विषय पनि “ग्ल्यामर” को दुनियासंग दाज्न मिल्ने भइसकेको छ । हैन भने नेचर र साइन्सका प्रकाशनहरुमा किन अमेरिकि र बेलायतिहरुको वर्चस्व हुन्छ ?
साइन्स र नेचरले छापेका प्रोपागाण्डा आर्टिकलहरुको थुप्रो मैले पनि उदाहरणको रुपमा देखाउन सक्छु ।
हो चिनिया मित्रले प्रा. डा. काइ मिङको विषयमा त्यहि भने । उनी एउटा सफल वैज्ञानिक रहेछन र उनको सिंगापुरको हिसाबले वार्षिक औसत रुपमा वैज्ञानिक अनुसन्धानका लेखहरु प्रकाशित हुंदारहेछन । तर पश्चिमी “बोस”हरुको प्रवेश पछि पहिले देखि काम गर्दै आएकाहरुको जागिर खोसिने क्रम शुरु भएछ । त्यसै क्रममा प्रा. डा. काइभन्दा अगाडि पनि धेरै जनाको जागिर खोसिइसकेको रहेछ त्यसैले उनिहरु चिन वा अन्य देशतर्फ लागेका रहेछन । तर डा. काइका बच्चाहरु सिंगापुरको स्कुलमै पढ्ने भएका कारण उनी सिंगापुर छोड्न नसक्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा रहेछन । त्यसैले अन्तिम बिकल्पका रुपमा ट्याक्सी चलाउन लागेका रहेछन ।
अहिले सिंगापुरका अन्य रिसर्च संस्थाहरुमा पनि त्यहि हाल देख्न सकिन्छ । यसलाई “कन्सपिरेसी थ्योरीका” रुपमा लिनुस वा “प्रतिस्पर्धा”मा फेल भएको हिसाबले लिनुस वा सिंगापुर सरकारको “फितलो भिजन”का रुपमा लिनुस तर विज्ञान यहां असफल भएको छ । दर्जनौं अनुसन्धानका लेखहरुले अरुलाई बाटो देखाउने वैज्ञानिक आज आंफै बाटो बिराएर बांच्ने बाटो खोज्दैछ , के यो बिडम्वना हैन ?
बेलायतमा कुनैबेला एनएचएसका मेनेजर भएर बसेका एक जना नेपाली भलाद्मी दाइ हुनुहुन्छ, उहांले ५५ वर्षको उमेरमा अथाह बायो डाटा र एप्पलिकेसन फाल्दै “निर्वाणा”को जीवन बिताइरहेको पनि नजीकबाट देखेको छु । मैले देखेको र बुझेको कुरा धेरै देशका आप्रवासीहरुको लागि पश्चिमा देशहरुमा उनिहरुको छालाको रंग र मातृभाषाको एक्सेन्टले एउटा हैन धेरै पुस्तासम्म पक्कै पनि पीडा दिइरहनेछ ।
एकजना विद्वानको भनाइ थियो :
"Inalot of the research institutes now, performance is assessedahuge part by how much intellectual property churned out, as well as how much industry dollars brought in." यो भनाइलाई वैज्ञानिक साम्राज्यबादको रुपमा लिनुस या व्यापार तर नियत छर्लङ छ ।
सिंगापुर मात्रै हैन मलेशियादेखि मध्य एशियाका स्कुल युनिभर्सिटिहरु पनि अंग्रेजी भाषाका आयातित “गुरु”हरुका लागि सुम्पिएका छन । हुन त नेपाली पनि विर्सेर पुरानै युगतिर फर्किन थालेको नेपाली समाजमा यस्ता कुराले अर्थ नराख्लान तर दुनियाँको अगाडि आफ्नो पनि अस्तित्व छ भनेर केहि गर्न खोज्ने नेपाल या चिन या अन्य एशिया देखि अफ्रिकासम्मका मान्छेहरुका लागि अंग्रेजी भाषाको दासत्व आफ्नै भूमीमा समेत लोप्पा ख्वाउन पछि पर्दैन भन्ने कुरा हेर्न डा. काईकै उदाहरण काफी छ । नेपालीहरु नाक, रौं र आंफैले नजान्ने “मातृभाषा”को विवादमा रुमल्लिएको बेला "मेरो सहानुभुति र प्रोफेशनल भातृत्व" नेपाल भन्दा धेरै टाढासम्म फैलिएर डा. काइ मिङसंगै रहनेछ ।
यो विषयमा धेरै कुरा लेख्न मन थियो तर कति शब्द वा भावहरु अपाच्य हुन सक्लान भनेर आफ्नो कलमलाई थांती राख्नमै उचित ठाने र दुनिया हल्लिएको हेर्ने चक्करमा आंफै हल्लिन थाले । बांकी हल्लिन छाडे पछि भोलि तपाइहरुसंगको भेटमा !
Posted by: पीजी Labels: अनौपचारिक, अभिव्यक्ति